बेवास्ता गरेका कांग्रेस सभापति देउवाले किन जनाए डा. केसीकाे मागमा एेक्यबद्धता – Dhungkharka
बेवास्ता गरेका कांग्रेस सभापति देउवाले किन जनाए डा. केसीकाे मागमा एेक्यबद्धता
५ श्रावण २०७५, शनिबार ०९:२७
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्षअघि अाफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला डा. गाेविन्द केसी २३ दिनसम्म अनशन बस्दा पनि माग सुनुवार्इ गराउन सकेनन् । उनकाे पालामा केसी ४ पटक अनशन बसे तर समस्या समाधान भएन । तर यसपटक भने उनले डा. केसीका माग जायज भएकाे भन्दै एेक्यबद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै पुगी सभापति देउवाले अनशनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिए । उनले डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भएकाले तत्काल वार्तामा बसेर माग सम्बोधन गरी केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग ‘जाेडदार माग’ समेत गरे ।
उनले विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यायदेश अहिलेको सरकारलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न अाग्रह समेत गरे । मेडिकल कलेज सञ्चालनसम्बन्धी केसीले उठाएका मुद्धा सही भएकोले सोही अनुसार सरकारले विद्येयक पास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकाे बुझिएकाे छ ।
सभापति देउवाले लोकतन्त्रमा एकजना नागरिक पनि निकै बलियो हुने बताउँदै डा केसीका माग जायज रहेकाे दाबी मात्र गरेनन्, उनका पछाडि लाखौँ जनता रहेको समेत बताए ।
गत २०७४ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला डा केसी ४ पटक अनशन बसेका थिए । उनले समग्रमा ११ अाैं पटककाे अनशन २०७४ साउन ९ बाट सुरू गरी २३ दिनपछि साउन ३१ गते माग सुनुवार्इविनै स्थगित गरेका थिए । देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको क्षति भएकाले साेकाे शाेकमा डा. केसीले अनशन स्थगित गरेको बताएका थिए ।
तत्कालीन एमाले सांसद सभापति रहेकाे महिला बालबालिका समितिले चिकित्सा विधेयक अघि बढाउन नमान्दा तथा सम्झाैता विपरित मनमाेहन मेडिकल कलेज सरकारलार्इ नबेच्ने अडान एमालेले लिएपछि डा केसीकाे माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवा असफल रहे ।
त्यसपछि डा. केसी ११ अाैं पटककाे अनशन २०७४ कै दशैंका बेला बसेका थिए । संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर पास गर्न खोजिएको भन्दै डा. केसीले ०७४ असोज ९ गतेदेखि आमरण अनसन सुरू गरेर दुई दिनपछि दशैंभरका लागि भन्दै फूलपातीकाे दिन असाेज ११ गते स्थगित गरेका थिए । १३ गते तत्कालीन प्रम देउवालाई भेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमरोड नगरी पारित गर्न उनले असोज १९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। तर सरकारले नमानेपछि केसीले १९ असाेजबाट १३ अाैं अनशन थाले ।
सुरूका धेरै अनशन बेवास्ता गरेका प्रम देउवाले अन्ततः चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन सहमत भएका थिए, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश गत कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । तर त्यसबेला संसद नै नरहेकाले साे अध्यादेशलार्इ प्रतिस्पापन विधेयकका रूपमा केपी अाेली नेतृत्वकाे सरकारले गत चैत्र १५ गते संसदमा दर्ता गरायाे ।
फेरि डा. केसीले ०७४ पुसमा १४ अाैं पटककाे अर्काे अनशन थाले । चिकित्सा सुधारको मागका साथै यसपटक भने उनले सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गाेपाल पराजुलीकाे राजिनामालार्इ मूल मुद्दा बनाएका थिए । २४ पुषमा सुरू गरेकाे अनशन २८ पुषकाे मध्यरातमा सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएसँगै २९ पुषकाे बिहानै तोडेका थिए ।
हाल संसदबाट पारित गर्न खाेजिएकाे चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उक्त अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था ताेडमाेड तथा खारेज गरिएकाे भन्दै डा. केसी १५ अाैं अनशनमा छन् । यसपटककाे अनशनमा पनि केपी अाेली नेतृत्वकाे सरकार उदासिन देखिन्छ । डा. केसीलार्इ सक्दाे गलाउने रणनीति सरकारकाे रहेकाे बुझिन्छ । केसीका तर्फबाट वार्तासमितिका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले वार्ताका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट आजसम्म कुनै पनि जानकारी नआएको बताएका छन् ।
तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने केसीकाे मुद्दालार्इ यसैबेला दुर्इतिहाइकाे वाम सरकार विरूद्ध प्रस्तुत हुने गतिलाे मुद्दा बनाएकाे छ । सत्तापक्षका नेता तथा मन्त्रीहरूले समेत डा. केसी कांग्रेसकाे माेहरा बनेकाे अाराेप लगाउँदै सरकार अाफ्नाे लाइनबाट पछि नहट्ने बताउँदै अाएका छन् ।
कांग्रेस नेता गगन थापा अाफै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा समेत केही गर्न सकेनन् तर अाज उनी पनि केसीकाे मागमा एेक्यबद्धता जनाउँदै प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन् । विगतमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील काेइराला अनशनरत डा. केसी मरे मरून्, म के गरूँ त भन्ने अाशयकाे अभिव्यक्ति दिएपछि उनी पनि अालाेचित बनेका थिए ।
अाफ्नै सरकार हुँदा डा. केसीका जायज माग पूरा गर्न नसकेकाे तर अाज अाएर केसी सही छन् भनेर कांग्रेसले चर्काे स्वर बनाइरहेकाे नसुहाउने भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका नेतालगायत एक थरी विश्लेशकले अालाेचना समेत गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको मर्मअनुसारको विधेयक आउनुपर्नेलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै डा केसीले १५ अाैं अामरण अनशनमा छन् । उनले यही गत असार १६ गते जुम्लाबाट ‘निर्णायक’ अनशन शुरु गरेका थिए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशतमा रहेका केसीकाे स्वास्थ्य जोखिममा पर्नेसक्ने भन्दै सरकारले बिहीबार हेलिकप्टरमार्फत डा केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौँ ल्यायो । उनलार्इ जबरजस्ती काठमाडाैं ल्याउन खाेज्दा स्थानीयले अवराेध गरेपछि झडप समेत भयाे । उनकाे अनशन अाज २२ अाैं दिनमा पुगेकाे छ तर समस्या समाधानबारे सरकार अझै गम्भीर नरहेकाे बताइन्छ ।